Archive du 20200204
Serge Zafimahova Tena hafampana ny raharaha politika eto
Mila miaraka mikaon-doha amin’izay laharampahamehantsika ho an’ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny.
Fanenjehana an-dRaoul Arizaka Rabekoto Hiitatra amina minisitera sy olona maro…
Nandraisana fepetra tsy mahazo mivoaka ny sisin-tanin’i Madagasikara na IST ny filohan’ny Federasiona Malagasy ho an’ny taranja baolina kitra (FMF) Atoa Arizaka Rabekoto Raoul.
Misy tsy faly ny polisim-pirenena “Olona efa nanimba no tadiavina haverina….”
Misy fitarainana avy ao anatin’ny polisim-pirenena fa misy olona efa Tale misahana ny maha olona (DRH) teo aloha efa nisy olona roa nisolo azy taoriany no tian’ny tompon’andraikitra ambony vaovao
Bureau des Doléance - Ambohitsorohitra “Nisoroka ady ara-piarahamonina izahay”
Tsy manana olana amin’ny minisitry ny fitsarana teo aloha, Jacques Randrianasolo,
Baolina kitra Ligue 1 eto Analamanga Miditra amin’ny andro faha-13 farany ny fifanintsanana
Mbola eny amin’ny kianja sentetika St Vincent de Paul eny amin’ny Complexe Sportif Akamasoa eny Bemasoandro Ambohimahitsy no hanohizana ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga
Basket Africa League Hanomboka amin’ny volana martsa izao ny andiany voalohany
Amin’ny volana martsa 2020 ho avy izao no hanomboka, aty amin’ny firenena maro aty Afrika, ny andiany voalohany amin’ny taom-pilalaovana Basketball Africa League.
Mpanazatra Rugby Malagasy miofana ho Niveau 3 Miatrika « Evaluation » nanomboka omaly
Miatrika fiofanana andiany faharoa antsoina hoe "évaluation niveau 3 des entraîneur Malagasy» etsy amin’ny Hotel Tamboho Ambatonakanga nanomboka
Ataovy fifaninanana masina
Manomboka mazava ny toe-draharaha mahakasika ny sakantsakana na filana vaniny tany Alaotra.
Fisintonana famatsiam-bola avy any ivelany Tsy manana “négociateur” matotra i Madagasikara
Mbola sahirana i Madagasikara amin’ny fifandraisana maneran-tany na amin’ny lafiny ara-barotra na amin’ny lafiny ara-toekarena ankapobeny.
Fitantanam-bola fisotroan-dronono Hirosoana ny fanavaozana ireo karatra rehetra
Tsikaritra ho nisy tsy fahatomombanana ny teo anivon’ny fitantanana ny vola fisotroan-dronono tao ho ao.
Praiminisitra Boris Johnson « Ho lasa lavitra ny toekaren’i Royaume Uni »
Nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo dia nanambara tamin’ny fomba ofisialy fa tsy ao anatin’ny Vondrona Eoropeanina intsony ny Royaume Uni.
Wuhan-Chine Vita tao anatin’ny folo andro ny hopitaly roa vaovao
Folo andro monja no nananganan`ny sinoa hopitaly "préfabriqué" vaovao roa any ambanivohitr’i Wuhan, faritany nipoiran’ny valanaretina Coronavirus, handraisana an-tanana ireo marary noho ny hafenoan’ny hopitaly sy mba hifehezana ny fiparitahan’io valanaretina io.
Fizarana fanampiana ho an`ny traboina Aleo tratra aoriana toy izay tsy misy …
Tonga any amin`ny faritra Alaotra Mangoro ny fanampiana avy amin`ny fitondram-panjakana ho an`ireo traboina 2 500 ka tonga nizara izany ny filoha Rajoelina mivady omaly.
Fanoloana fantson-drano Toerana maromaro no efa nahazo tombontsoa
Mitohy ny asa fanoloana ireo fantson-dranon’ny JIRAMA efa tranainy miaraka amin’ireo teknisian'ny kaompania TRG avy atsy Afrika Atsimo.
CASH POINT eto an-drenivohitra Nalana ireo mibahana ny lalan’ny mpandeha an-tongotra
Miroso amin’ny asa fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalana hatrany ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Ambohimangakely Im-pitopolo niverenana vao afaka ny fako
Nezahana nalana tao anatin’ny loto sy ny korontana ny mponin’Ambohimangakely, hoy ny ben’ny tanàna vaovao voafidy tao an-toerana, Thierry Radafy na i Bota, omaly.
Mahamasina Torana ilay mpivarotra nokorontanin’ny polisy
Renim-pianakaviana iray mpivarotra amoron-dalana eny Mahamasina omaly hariva no torana tsy nahatsiaro tena avy hatrany rehefa naparitaky ny mpitandro ny filaminana ny entany.
Ambatomanga Manjakandriana Voafidy ho filohan’ny filankevitry ny tanàna Atoa Rasendra Manampisoa
Nanatanteraka fivoriana omaly alatsinainy ireo mpanolotsaina eo anivon’ny kaominina ambanivohitra Ambatomanga, distrikan’i Manjakandriana.
Sinoa maniry hiasa eto Madagasikara Naato vonjimaika ny fanomezana fahazoan-dalana
Mahatratra 200 isan-taona ireo teratany sinoa miditra eto amintsika mba hivarotra na hitrandraka harena ankibon’ny tany.
Aorian`ny andro ratsy Mirongatra ny valan`aretina
Anisan`ireo tompon’andraiki-panjakana nanatrika ny fizarana fanampiana ho an`ny traboina tany Alaotra Mangoro omaly ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Ahmad Ahmad.
Fahasahiranana sa hadalana ? Saika natsipiny tao anaty rano maloto ny zanany
Tena mihabiby ny olombelona. Asa na noho ny fahantrana diso tafahoatra na noho ny fahasahiranana fa renim-pianakaviana iray indray omaly teny 67 ha no nikasa hanipy
Hafari malagasy Novaina ireo mpitantana
Tsy mila seza vao afaka mitondra anjara biriky ho fampandrosoam-pirenena, hoy ny filoha mpanorina ny fikambanana Hafari Malagasy, Jean Nirina Rafanomezantsoa,
Andrefambohitra Ampitatafika Ny mpitaiza azy ihany no namono an'i Harena
Ny alarobia 29 janoary lasa teo, nindaosin'ny fahafatesana i Harena, zazalahy kely vao dimy volana monja, tao Andrefambohitra Ampitatafika.
Ben’ny tanànan’i Miandrarivo “Hanarina ny fahavoazana rehetra aho”
Vonona ny hanarina ny fahavoazana rehetra tao amin’ny kaominina Miandrarivo ny ben’ny tanàna voafidy tany an-toerana, Atoa Rajaonarivony Jocelyn Prosper.